China stationery inogadza fekitori uye vagadziri | SJJ
Iwe uchiri kutsvaga maSpecial Stationery Sets ayo hwaro kutapira kwevana? Iwe unogona kutarisa kune edu akanaka mapepa emafaira. 6pcs zvinyorwa zvakaiswa mupurasitiki yekutakura kesi ine runako, nyore kutakura, chipo chakakwana chechikoro, imba, pati kana zvimwe zviitiko
Iwe uchiri kutsvaga Special Stationery Sets hwaro hupi hunotapira vana? Iwe unogona kutarisa kune edu akanaka mapepa emafaira. 6pcs zvinyorwa zvakaiswa mupurasitiki yekutakura kesi ine runako, nyore kutakura, chipo chakakwana chechikoro, imba, pati kana zvimwe zviitiko.
Isu tinopa akasiyana akasiyana akasarudzika echikoro emahofisi, emahofisi emahofisi, emahofisi ekuisira evana kana ekugovera kuchikoro. Takazvipira kuvandudza zvigadzirwa zvitsva zvevana. Kugadzira, mhando yepamusoro uye kuchengetedzeka ndizvo zvinangwa zvedu.
Kuti uzive zvakawanda nezve akakwana akasarudzika akamira emiti kits yako, yako chaiyo yekudhinda sarudzo, mifananidzo yehunyanzvi, mutengo wakanakisa kana chero zvimwe zvekusimudzira zvipo zvevana, inzwa wakasununguka kutitumira meseji.
Inosanganisira penzura mbiri, 1 mutongi, 1 chipukuta, 1 inorodza, 1 PVC kesi ine runako
Vhura magadzirirwo emahara eforoma kuchaja & Kudhinda kumisikidza fizi.
Nyore kutakura, yakakwana chipo chechikoro, imba, pati kana zvimwe zviitiko
Yakasarudzika sekukumbira kwako, iine akasiyana siyana saizi uye mavara
Zvadaro: Silicone Bracelet uye Wristbands
Makuru Penzura Nyaya
Yakapora Penzura Nyaya
Penzura dzeChikoro Makesi
Yakapfava Penzura Kesi